Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi balaadhan uu Hogaaminayo aayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey Garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti. |
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi balaadhan uu Hogaaminayo aayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey Garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti.
Djibouti(GNN):-Madaxweynaha iyo weftigiisa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey Wasiirada Wasaaradaha Biyaha, Beeraha, Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga ee Jabuuti iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlada Jabuuti .
Madaxwayne Biixi Muuse Biixi ayaa inta Dalka magaalada Jabuuti joogo la filayaa in kulamo gaar ah la qaato Madaxda dalkaasi ayna kawada hadlaan xidhiidhka labada dhinac ka dhaxeeya iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo arimo kale .
Madaxweynaha Somaliland ayaa socdaalo ku tagay qaar kamid ah Wadamada dariska la ah Soomaaliya , waxa uuna dhawaan safar shaki badan abuuray ku tagay dalka Kenya halkaas uu kulan kula qaatay Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta.